INONA NO TANTARANTSIKA
AudioSourceRE no famaranana ny fikarohana momba ny 18 taona mahery amin'ny fisarahana tsara nataon'i Dr. Derry Fitzgerald (CTO). Ny algorithm manokana dia manolotra izay inoanay ho tsara indrindra mampisaraka fantsom-peo misy kalitao tsara indrindra azon'ny tsena.
Ny vinan'ny orinasanay dia ny hanohy ho mpamorona lozisialy de-mixing avo lenta ho an'ny mozika production, post-prostudio fanodinana, DJ, producer, artista ary mpitendry zavamaneno.
Miezaka izahay promampihena avo lenta pro-audio profantsona izay sasany amin'ireo rindrambaiko maneno, manovaova ary mamorona tsara indrindra profantsona misy.
AudioSourceRE dia naorina tamin'ny volana Jolay 2018 ary tao anatin'ny volana maromaro dia nandray ny pro-Mivarotra audio amin'ny alàlan'ny tafiotra miaraka amin'ny famotsorana ny DeMIX Pro ary DeMIX Essentials ao amin'ny AES 2018 any New York.
Arahabaina ho fanavaozana farany amin'ny fisarahana fisarahana sy fanovana sparta, DeMIX Pro ary DeMIX Essentials nanana mpanatrika, mpanentana ary, ny indostria mihorakoraka momba ireo vaovao manaitra ireo products. Ny orinasa miorina amin'ny lazany mitombo amin'ny famolavolana vahaolana tena mora ampiasaina amin'ny vahaolana fisarahana amin'ny famoahana ny RePAN, tena fanao, fisarahana audio fisintahana ho an'ny DAW amin'ny NAMM 2019.
Mampiditra ny teknika farany farany farany amin'ny AI mandroso ankehitriny demixing teknolojia izahay manome anao ny rindrambaiko fanasarahana feo matanjaka indrindra azo alaina; DeMIX Pro Version 2.0 ary DeMIX Essentials Version 2.0
Mpanorina & CTO
Derry be namoaka, miaraka amina firaketana efa ela niorina tamin'ny famolavolana haitao loharanom-pamokarana feo avo lenta nandritra ny roa taona.
Tale Jeneralin'ny CEO sy varotra
John dia mitazona ny fampandrosoana ara-bola sy ara-bola, miaraka amin'ny fahazoana manampahaizana marobe amin'ny fampandrosoana sy ny marika nomerika iraisam-pirenena.
Estefanía dia manana traikefa amin'ny milina sy fianarana lalina amin'ny audio sy mozika manokana amin'ny signal digital proFampiharana fampitsaharana fampitsaharana fampahalalana sy mozika.
Jeremy no tompon'andraikitra amin'ny fivoarana eo alohan'ny farany ary manana traikefa manokana amin'ny sehatra manokana amin'ny fivoaran'ny rindrambaiko audio.
Miasa amin'ny fampandrosoana ny serivisy tranonkala anatiny i Stephen ary manana traikefa eo amin'ny sehatry ny haitao mozika.
Paddy dia manana traikefa an-taonany ho web developer sy mpamorona sary hatramin'ny nahavitan'ny BA tao Multimedia.